Sukkah - isigodi esincane esisogwini ogwini woLwandle Olumnyama, uzungezwe izintaba futhi siluhlaza amahlathi ezibanzi enezicabha. Isigodi itholakala kude muzi ophithizelayo. Le ndawo ikhanga labo abafuna shí ukuthula, ukufihla kusukela isigqi crazy wokuphila futhi nje uphumule eduze lolwandle. Ngo lonke lokhu ubuhle futhi etholakala amahhotela eziningi ethokomele isivakashi izindlu. Leli dolobhana elise yezindawo ethokomele futhi enhle kakhulu eduze ethandwa resort edolobheni Anapa. Waba omunye ethandwa kakhulu resort izindawo kulabo kwamambala iholide umoya inkampani cozy zasemazweni ashisayo futhi kuthule heady.
Izinto okumele uzenze ku sukkah?
Guest izindlu Sukkah kuthinte induduzo yayo, imfudumalo, induduzo kanye nemishini. Lokhu ukuzijabulisa we yaseYurophu futhi ezingeni eliphezulu. Izivakashi amaholide angakhetha amakamelo amahhotela amakhulu ukhululekile futhi boarding kwezindlu nezakhiwo encane, isivakashi izindlu ehhotela izakhiwo. Leli dolobhana iholide ungathola ngempela fun of ebhishi eningizimu iholide: dive emanzini ezicacile, ukuthamela ilanga phansi kwelanga okufudumele. Amaholide zihlukile, futhi okubaluleke kakhulu, lisebenza futhi esebenzayo. Fans of ohlanganyela emidlalweni amanzi nethuba sivivinywa ukulungela amakhono abo - diving, ukuntweza phezu kwamagagasi, snorkel futhi scuba diving. Ungaphinde uye ku ezihlukahlukene ethokozisayo ogibele ihhashi.
Uma uzama ukuthola indawo mnandi kumephu sesiphila asebenzayo, ezithakazelisayo futhi iholidi laso, ukhetho best - kuba le Sukkah esigodini. Kule ndawo yasezulwini futhi exotic ungakwazi kwamandla ukuthola izindawo zokuhlala ngokwabo. Succo ukhululekile isivakashi izindlu nijabule njalo ukuba bamukela izivakashi. Ukuze imali encane uthola service enhle.
Imindeni nezingane akufanele sikhathazeke ngalokho nalapho ingane yabo uzobe bekwi-Sukkah. Guest iyisonto ebaleni lokudlala yezingane ne kwemizwelo. Budebuduze emzaneni kukhona ihlengethwa engavamile. Ufuna buka, ngenkokhelo ungakwazi ukondla izilwane futhi ukuthatha isithombe ne amahlengethwa nezinye izakhamuzi zakhona. indawo kakhulu elula ehhotela ivumela ezokungcebeleka nganoma isiphi isikhathi sosuku ngaphandle kwezinkinga ukuthola endaweni efanele.
Uma kukhona isifiso futhi ithuba kancane ukuba uchithe amaholidi kwakho induduzo, asikho isizathu ukuya phesheya e-ehhotela okunethezeka ephezulu ezingeni. Kufanele kube lula ukuba beze lapha, edolobhaneni elincane eningizimu nogu. izindlu lezivakashi Sukkah kungekho amakamelo ngaphansi ethokomele ukuqinisekisa ukuthi uthola eziningi imizwelo eyakhayo namandla owawusisebenzisa lonke unyaka wonke.
indlu Guest "Rainbow"
Budebuduze kolwandle, ngemizuzu engaba ngu-10 kude, okuyinkimbinkimbi yokuhlala elise ezikhangayo guest house "Rainbow" (Sukkah).
Amakamelo kule eziyinkimbinkimbi - "ejwayelekile" isigaba. Esizeni ukuzijabulisa ngokunganaki izingane kukhona inkundla yokudlala enkulu. Ebaleni iseningizimu itafula ithenisi kokubili ngabantwana nangabantu abadala, kukhona engadini zezihlahla yokupaka. Izivakashi kubonakala ekhishini zokupheka, ungasebenzisa izoso. Ubani ongafaka ngenkokhelo ukuqasha imoto noma ibhayisikili. Kukhona kungenzeka ukuhlela ukubona indawo izinkambo. Ngo eduze eziyinkimbinkimbi ehhotela ukungcebeleka abahambi kukhona itshana lolwandle, ungakwazi ukuhamba kwaleli chibi, abe inkomishi yekhofi noma ukunambitha cuisine sendawo amathilomu ethokomele nezindawo zokudlela. Kulabo abafuna ukusebenzisa ngayo imali yabo ezitolo isicabha, futhi ipaki kuyokushiya umangele umbala waso. Kungenzeka ukuba ukubhuka inkonzo Shuttle kulabo abangekho ababeyizazi edolobhaneni Sukkah. Ezindlini ezamukela obakhathalelayo induduzo izivakashi zayo.
I guest house "Muscat"
Uzungezwe izintaba, ngaphakathi ukuhamba ibanga kusuka ogwini lolwandle lapho umoya ohlanzekile - ingxenye eyinhloko lonke, kuyihhotela ethokomele nge iwayini ukahle ngokuthi "Muscat". Ukuze kube lula izivakashi izitolo eduze, i-pharmacy, i-ATM, amathilomu nezindawo zokudlela. On the house guest kulungisile izindlu iholide, BBQ elula, ekhishini ehlobo nge pergola, elitholakala zonke adingekayo ukuze bakwazi ukuzenelisa inkonzo, yokupaka mahhala izimoto.
Ukuze ihlanganise amaholide guest house "Muscat" (Sukkah) has amakamelo kanye namakamelo lwezigaba ezahlukene. It has konke nebhodimo: toilet lokugezela elineshawa, isiqandisi, mini-bar, iketela kagesi, umsebenzi edeskini, omiyane net, air conditioning, isimo sezulu - control, kuvulandi ukhululekile ukubukwa emangalisa we kwezintaba nolwandle imibuthano kusihlwa.
Lapho isicelo kanye ngenkokhelo nihlela a Shuttle. Guest izindlu Sukkah sipho izimo akuzona sibi ukwedlula "inkanyezi" amahhotela e Anapa.
I guest house "Summer"
Kwelinye lamadolobha amahle kakhulu ezincane, okuyinto esisogwini olusentshonalanga Black Sea, yindlu isivakashi "Summer". Insimu incane, kodwa likwazi konke okudingayo ukuze ukuhlala ukhululekile. Izindlu ezenziwe ngokjuni, okuyinto ulunika eyinkimbinkimbi ukubukeka isixwayiso abasebenzi izonikeza kokuhlala ezimnandi futhi zikhululekile. Indlu isivakashi "Summer" (Sukkah) itholakala eduze nelwandle itshana lolwandle. Ukuqinisekisa izivakashi ukudla ehhotela anemisila ikhishi nge ukupheka izindawo. On the indawo kukhona Gazebo ukuzijabulisa nakusihlwa imibuthano nomndeni inkampani fun, izingane kukhona ebaleni lokudlala, yokupaka khulula etholakalayo. Futhi ukwenza kube kumnandi uphumule ngesicelo kungaba inikelwe Kuban iwayini ngokuqondile kusukela ifektri - umakhi.
Room service ukuze abasebenzi ehhotela.
ikhishi ukhululekile endaweni yokudlela.
Kungenzeka uku-oda umhlangano esikhumulweni sezindiza futhi sesitimela.
Clock kuqashelwe yokupaka isendaweni ensimini.
Abanikazi ehhotela eziyinkimbinkimbi izivakashi inkonzo etotoswayo ejwayelekile European futhi ngesikhathi esifanayo imadlana. Elihunyushwe ngokuthi "Delmont" - kuba "indlu enhle". Lokhu izindlu ezincane ezine izibuya kakhulu efana le nqaba, nge ethokomele ekhaya-isitayela egcekeni lalo, lapho kukhona ihlobo zokudlala ongaphandle, imigoqo kanye, yebo, ichibi. Ukuqhathanisa neFrance akuyona ngephutha: ihhotela Itholakala Sukkah, owaziwa ngokuba Chic yayo izivini iwayini elimnandi oludakayo.
Amagumbi 40 amafulethi ukhululekile lwezigaba ezahlukene, lapho kukhona ifenisha enhle kanye nendwangu ebizayo. Bakuhlonyiselwe nazo zonke walk in eshaweni, WC. TV, efrijini kanye air conditioning kukhona kuwo wonke amagumbi - ejwayelekile futhi Deluxe.
On endaweni kuvulandi kukhona izindawo zokudla, ehlotshiswe nge isitayela ephakathi. Le miyalezo ingenye yezindawo ozithandayo lokuphila kuleli hhotela. Ekhishini we yokudlela ligcwele Motifs iMedithera. abathandi Sweet kusimangaze uphudingi. Iwayini itholakala yonke ukunambitheka.
Ezinye izindlu oyisivakashi sukkah eduze kolwandle bacwilisa izivakashi zayo ngaphansi kwesimo kwamanye amazwe. "Delmont" - omunye wabo. Kuyinto France kancane.
Indlu yetivakashi "I-Panorama"
Indawo ehhotela ungakwazi ukujabulela ugodo iphunga, okumsulwa ulwandle umoya, amanzi ecacile futhi ebhishi itshana uzungezwe izintaba. Lena entsha, European-level isakhiwo nge amakamelo, izigaba ezahlukene wenduduzo, kusukela elula umxhwele ngobukhulu amakamelo. Amakamelo anemisila ngokuvumelana nezindinganiso yakamuva yemave emhlaba. Bathi nje kuhluke ngobukhulu, isibalo amakamelo kanye ukutholakala imibhede owengeziwe. Amakamelo anemisila konke okudingayo: nekamelo lokugezela, kanye nekamelo lokugezela elineshawa, isiqandisi, mini-bar, air conditioning. Ukudiliva zezivakashi nezivakashi Shuttle sezindiza usebenza. Esikhathini eziyinkimbinkimbi kwamahhotela izivakashi kukhona imigoqo kanye zokudlela, izindawo ukubhema, kukhona ingadi enhle ezingavamile, yokupaka.
Lokhu konke kunomthelela ajabule, futhi ngenxa yalokho ukhululekile futhi kunempilo. izindlu lezivakashi, amahhotela Sukkah zitholakala ezindaweni ebabazekayo kwalesi sigodi. Lapha, nomaphi lapho ubheka yonke indawo ubuhle. Vele ehhotela - futhi isivele ogwini. Ngakolunye uhlangothi - ulwandle ahlanzekile afudumele, ngakolunye - yobukhosi izintaba, ne wesithathu - ethokomele izingadi zomphakathi kanye amapaki olunothile. Lapha wonke umuntu angakwazi ukuthola ukuthula nokuzola. Kodwa izivakashi abakhuthele sukkah futhi ngeke be bored. Zonke Ezokuzijabulisa, eziyizici zokungcebeleka ezinkulu, zikhona.
I-Ayurveda - kuyini? Uhlelo yendabuko imithi Indian